सिजन तरकारी खेती टाढा बन्द छैन, र धेरै vacationers आफ्नो खेत Greenhouses खरीद सोच्न। polycarbonate को लोकप्रिय Greenhouses, र यो कुनै दुर्घटना छ: सामाग्री धेरै व्यावहारिक र प्रयोग गर्न सजिलो छ। सकारात्मक गुणहरू polycarbonate द्वारा नजिकै, सबै दुनिया भर प्रसिद्ध छन्, तर भौतिक पर्याप्त कठिन छ, र व्यावसायिक मद्दत गर्न Resort छ भेद गर्न। यस्तो उत्पादनहरु को बजार मा, त्यहाँ fakes प्रशस्त, त्यसैले तपाईं एक ग्रीनहाउस छान्ने धेरै होसियार हुनु आवश्यक छ।
गर्नुपर्छ polycarbonate को मूल्य ध्यान - धेरै सस्तो उत्पादन चीन मा गरे, यो धेरै कमियां छ देखि, लिन छैन राम्रो छ। यदि सामाग्री एकदम सजिलो छ, यो शायद उहाँले पनि पुनर्नवीनीकरण सामाग्री देखि गरे, आफ्नो गरिब गुणस्तर बारे बताइएको छ। यस्तो polycarbonate उत्पादन गर्दा सम्भवत, धेरै स्तर, र उहाँले उल्लङ्घन गरिएको थियो छोटो समय टिक्न हुनेछ। स्वाभाविक, यस्तो सामाग्री, र मूल्य एकदम फरक हुनेछ। आज, धेरै चिनियाँ कम्पनीहरु को चिरपरिचित ब्रान्डहरु को नाम ले, तर यो किन्न आवश्यक छैन - अन्य देखो राम्रो Greenhouses को प्रकार।
गुणस्तर polycarbonate को संकेत
पहिलो चरण प्रमाणपत्र को विक्रेता सोध्नु हो, यो यस्तो सामाग्री को प्रत्येक प्रकार को लागि उपस्थित हुन अनिवार्य छ। अर्को, यो राम्रो कठिन हुनुपर्छ स्पर्श polycarbonate हात नाश गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं इन्टरनेटबाट सामान किन्न भने, त्यसपछि त सेवा र ग्यारेन्टी को आधिकारिक साइट सर्तहरू जाँच जालसाजी सुरक्षित हुनेछ र गर्न सक्ने निर्माता उत्पादन गर्न निश्चित छ। आधिकारिक साइट अवस्थित छैन, यदि वा यो तपाईं विश्वस्त प्रेरित गर्दैन, यो तुरुन्तै खरिद देखि फिर्ता गर्न राम्रो छ।
राम्रो र उच्च गुणस्तरीय polycarbonate, मुख्य करङहरु बाहेक, र थप पार्श्व सुदृढीकरण करङहरु, जो एक अतिरिक्त टिकाउ सामाग्री रूपमा सेवा र आफ्नो जीवनको अवधि बढाउन छ। तिनीहरूले अनुपस्थित छन् भने, त्यसपछि एक वर्ष पछि आफ्नो ग्रीनहाउस विनाशको एउटा अपरिवर्तनीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ, तर तपाईं निर्माता केहि प्रमाणित गर्न सक्षम हुने छैन, त्यसैले अग्रिम जाँच गर्नुहोस्।
विशेष गरी polycarbonate
Greenhouses र Greenhouses विभिन्न प्रकारका को निर्माण तिनीहरूले एक विशेष प्रयोग polycarbonate को प्रकार, र यो गजेबो र भवन अन्य प्रकार जान्छ कि एक फरक छ। दुई सय समयमा ग्लास बलियो - पहिले, यो एक भंगुर सामाग्री, यो तुलना लागि, धेरै टिकाउ छ। दोश्रो, यो ग्रीनहाउस लागि अनुकूल छ जो उत्कृष्ट प्रकाश प्रसारण, छ। तेस्रो, यो जो बिना यो बस साथै हरितगृह मा के गर्न सक्दैन गर्मी, फँसाने मा उत्कृष्ट छ। चौथो फाइदा यसलाई आकार लिन सक्छ, धेरै हल्का र मोड्नु गर्न सजिलो छ भन्ने छ। खैर, र पाँचौ - यो राम्रो साफ र कुनै पनि प्रदूषण पछि यो सफा गर्न धेरै सजिलो छ भन्ने छ।
polycarbonate Greenhouses लागि प्रयोग किन छ?
एक ग्रीनहाउस को धेरै उद्देश्य - यो एक राम्रो पूर्ण क्रप को खेती छ, र एक सक्षम वातावरण आवश्यक छ। यस सुन्दर वसन्त रात समारोह बिरुवा आश्रय, बलियो ultrafialetovogo विकिरण सुरक्षा देखि - यो सबै ग्रीनहाउस को काम हो। को बिरुवाहरु लागि सही र उचित हेरविचार तपाईं राम्रो फसल प्राप्त गर्न सक्छन्।
के एक "ड्रप"?
भनिन्छ रोचक "सानो थोपा" गलिशिआ कारण यसको आकार पानी एक थोपा को reminiscent गर्न प्राप्त गरेको छ। यो फारम धेरै अन्य बनाउछ र वर्षा को एक ठूलो रकम पतन जहाँ क्षेत्रमा स्थापनाको लागि उपयुक्त बाट यो distinguishes छ। छत हिउँ एक लामो समय को लागि Linger गर्न अनुमति छैन थोपाहरूद्वारा को रूप मा छ र यसको तीव्र वंश सुधार गर्छ। स्वाभाविक, यो नियम, यसको सेवा जीवन विस्तार छ, भौतिक लागि राम्रो छ। "सानो थोपा" - ग्रीनहाउस बोट उत्पादन, टिकाउ फ्रेम गुणस्तर बहुलक कोटिंग भइरहेको।
आफ्नो ग्रीनहाउस को विधानसभा गर्न प्राप्त, व्यवसायीक यो सल्लाह पालन। तपाईं निर्माण मा ACE भने, यो सहयोगको लागि अरू कसैले सोध्न राम्रो छ। पहिलो चरणमा, को पाठ्यक्रम, फ्रेम गर्न जा रहेको छ, polycarbonate काटन बनेको विधानसभा पूरा भएपछि। तपाईं आफ्नो स्थापना गर्न अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सबै माप पछि मात्र, फरक लम्बाईहरू घुसाउन स्क्रू प्रयोग गरेर उसलाई ओभरल्याप राख्न सही हुनेछ। प्रत्येक स्क्रू अन्तर्गत अग्रिम किन्न एक रबर गैसकेट, पर्ची गर्न अनुमति जो छैन र थप सम्मेलन ठाँउ, भौतिक नै हानिकारक बिना बलियो हुनेछ सबै भन्दा राम्रो छ।
को "सानो थोपा" ग्रीनहाउस polycarbonate स्थापना गर्दा, सामाग्री हुनेछ प्राकृतिक विस्तार र संकोचन सम्झना। मात्र उच्च गुणवत्ता फास्टनरों चयन गर्नुहोस्। आज, धेरै पसलहरु वाशर संग गर्मी प्रतिरोधी स्क्रू प्रस्ताव, तपाईंले यी प्रयोग र कामको गुणस्तर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
हरितगृह "सानो थोपा": समीक्षा
ब्रान्डहरु को एक धेरै हामीलाई विभिन्न आकार र डिजाइन मा Greenhouses खरीद पेशकश गर्दै छन्। किन "ड्रप" र कसरी यो माली कब्जा मा रहन लायक छ? म लगभग सबै तिनीहरूलाई को सकारात्मक, यो भवन मा समीक्षा धेरै फेला परेन। हरितगृह "सानो थोपा" कारण यसको विशेषताहरु गर्न सकारात्मक समीक्षा कमाए। माली निम्न लाभ हो:
एक टिकाऊ फ्रेम र उच्च गुणस्तरीय बहुलक कोटिंग यो मोडेल जाडो मा हिउँ ठूलो को नियमित हटाउने आवश्यकता छैन। कारण ड्रप आकारको हिउँमा सतह मा रहन छैन।
कारण 2-मीटर इस्पात आवेषण गर्न निर्माता द्वारा ग्रीनहाउस "सानो थोपा" इच्छित आकार विस्तार गरिएको छ। विशेष विभाजन प्रयोग गरेर, तपाईँले आन्तरिक ठाउँ बीच भेद सक्दैन।
निर्माताको मा ग्रीनहाउस "सानो थोपा" कुनै अंतराल र प्रायजसो खोंच छ प्रत्याभूति गरिएको छ।
अन्त अंश हावा vents, निकै बिरुवाहरु को हेरविचार सुविधा र भित्र तापमान नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता दिन्छ जो संग ढोका अवस्थित छ।
हरितगृह "सानो थोपा" - भारी-कर्तव्य, यो विधानसभा लागि आवश्यक सबै तत्व संग सुसज्जित छ। यो आधार सिधै जमीनमा सेट निर्माण गर्न अनुमति दिने, 20 × 30 × 1.5 मिमी, आधार पिन समावेश छ।
"सानो थोपा" - एक ग्रीनहाउस, जसमा धेरै सजिला सुविधा हिउँ ढलान। साइबेरिया को कठोर अवस्थामा यसलाई व्यावहारिक अपरिहार्य संरचना छ। मौसम अवस्था त प्रत्येक दोस्रो एक खेत सहायक मा आफूलाई हुन्छ, को ग्रीनहाउस बिना बाली बढ्न सधैं अनुमति छैन। "सानो थोपा" (हरितगृह) - एक, अद्वितीय टिकाउ र चिरकालीन उत्पादन polycarbonate को गरे। सधैं आफ्नो profusion खुसी हुनेछ उनको बाली उब्जाउ, र यो लिन्छ स्पेस, धेरै छैन धेरै संकुचित र प्रयोग गर्न सजिलो, र यसैले धेरै लोकप्रिय छ।
Ducks चेरी उपत्यका - राम्रो क्रस
रानी मौरी: परिवारको भूमिका
खुजली र महिला मा जल, उपचार, कारण, रोकथाम
ओजोन dropper। अनुप्रयोगको सुविधाहरू
पेन्सन "अगाथा", Anapa समीक्षा र फोटो
आत्म-बोध वा दोस्रो जन्म
सेवेरद्वीन्स्क को जनसंख्या। अर्थव्यवस्था, उद्यम, सेवेरद्वीन्स्क को क्षेत्रहरु
यो shotlansky व्हिस्की "Chivas Anne 's"